Letisia 2018: tsara ny vokatra, saingy mora ny vidiny | NewsMada
Letisia 2018: tsara ny vokatra, saingy mora ny vidiny
Nisokatra, alatsinainy teo tamin’ny 6 ora hariva, ny taom-piotazana 2018- 2019, ny vokatra letisia haondrana any ivelany ho an’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Tamin’ireo nohadihadiana toy ny tantsaha, ny mpanangom-bokatra ary ny mpanondrana, samy nilaza izy ireo fa tsara ny vokatra amin’ny ankapobeny, tamin’ ity taona ity, satria ampy ny rotsak’orana tany Atsinanana sy tany Analanjirofo.
Saingy misy olana ny vidiny hakan’ny mpanangom-bokatra any amin’ny tantsaha satria latsaky ny 1 600 Ar ny kilao. Tsy vitan’ izany fa hatao tomba-maso avokoa ny hanaovana azy amin’ny kesika na amin’ny garaba. Fantatra izany nandritra ny fidinan’ny delegasiona avy any Antananarivo tarihin’ny minisitry ny Varotra sy fanjifana, Rtoa Yvette Sylla, notronin’ny prefen’i Toamasina sy ny talen’ny fampiroboroboana ny ambanivohitra, andaniny.
Nilaza ny tale jeneralin’ny orinasa Quality Mad, Razakamisa Yvon, fa azo antoka ny hatsaran’ny vokatra aondrana amin’ity taona ity. Antenaina koa ny tsy hisian’ny mpanangom-bokatra hividy ny letisia latsaky ny 1 200 Ar ny kilao eny amin’ny tantsaha satria tsy tokony hohararaotina izy ireny.